10 Persons Who I wanna meet most! | The World of Pinkgold
မီးလေးဇာ on May 2, 2009 at 10:43 am said:
၀မှလှတာကွယ့် မကြားဖူးဘူးလား ပြောရင်းဗိုက်ဆာလာပြန်ပြီး ဟီးးးးးးးးး
တွေ့ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ မြန်မြန် တွေ့ဆုံရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် မွှမွှ
thutaw on May 2, 2009 at 1:19 pm said:
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ရကတည်းက အိုဘားမား ပါမှ ပါပမလားလို့တွေးနေရ့တာ .. ခုတော့ တန်းနေတာ ပဲ ထိပ်ဆုံက ပါတယ်လာတယ်….
ကျွန်တော်နဲ့ကော မတွေ့ချင်ဘူးလားဟင်… ဟတ်ဟတ်..
cuttiepinkgold on May 3, 2009 at 4:12 am said:
အမလေး.. နင့်များ မတွေ့ချင်မှ အဆုံး 😀
pm on May 2, 2009 at 1:51 pm said:
ပန်ဒိုရာ on May 4, 2009 at 12:30 pm said:
တွေ့ချင်တယ် ဆိုတော့ နည်းနည်း ကြွေသွားတယ်
စောင့်တော့ စောင့်ဦး.. အင်း မင်္ဂလာဆောင် ဖြစ်ဖြစ် လာရင်လည်း လာမှာပေါ့.. သတို့သားကပါ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေရင်ပေါ့။
Sunday on May 5, 2009 at 5:51 am said:
ငါက စာဖတ်ပြီးစဉ်းစားနေတာ ဘယ်နဲ့ နင့်အခေါ် ” လဒ ” နဲ့ မမဆေးလ်ဗား ကျတော့ ဘာလို့ မပါလိမ့်လို့ 😛 ။ အေးဟယ် နင်မင်္ဂလာမဆောင်သေးနဲ့ ဦးနော် ဟိတ်ကောင်။ ဒါမှ ငါပြန်လာရင် အပီကဲ အပီဟဲလို့ရမှာ ငှဲငှဲ။ အသီးကွဲသူများဆုံတွေ့ ခြင်းပေါ့ 😀
cuttiepinkgold on May 5, 2009 at 6:44 am said:
မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ သူတွေကို ဦးစားပေးပြီး ရေးထားတာဟ.. ဂျစ်ကလည်း.. ငါက မတွေ့ချင်ပဲ နေမလားလို့.
Yan on May 8, 2009 at 3:16 am said:
ပင့်ကူဆိုတဲ့ နာမည်ကြားဖူးကတည်းက တွေ့ချင်နေတာ.
အဲလေ… ဟုတ်ပါဘူး. ကျူတီပင့်ဂိုးလ် (CutiePinkGold) လို့ပြောတာ.
ကျွန်တော့်ကို တွေ့ချင်တဲ့ လစ်စ်ထဲ တို့ထားလို့ ကြက်သီးထမိ (အဲလေ) ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်.
မြေနီကုန်းက ရွှေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း ထိုင်ပြီး နံပြားထောပတ်သုတ်နဲ့ ကျဆိမ့်သောက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးစစနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရင် ကျွန်တော်ပဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်.
ဒီနှစ် ရန်ကုန်ပြန်လာဖြစ်ရင် ပင့်ကူရဲ့ ရုံးခန်းကိုလာပြီး ပင့်ကူတစ်ကောင် လက်ဆောင်လာပေးမယ်. TARANTULA SPIDER နော်. ဘာမှတ်လဲ..
ညီမ တွေ့ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ တစ်နေ့ တကယ်တွေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ…
မောင်လူအေး on May 9, 2009 at 9:02 am said:
တွေ့ရမှာပေါ့ကွယ်… ညီမလေးရယ်… အစ်ကို မင်္ဂလာဆောင်ကျရင် သတို့သမီး အရဲလာလုပ်… 😛
cuttiepinkgold on May 9, 2009 at 9:06 am said:
အဲ.. သတိုးသမီး အရံမလုပ်ဘူး.. ပန်းကျဲပေးမယ်.. ဂေါ်ဖီပန်းတွေ.. အဟိ
သဲပွင့် on June 5, 2009 at 11:49 am said:
မိန်းမ… နင်ကငါ့ကိုကျ မတွေ့ဖူးချင်ဘူးလားလို့
ငါ့မှာတော့ နင့်ကို တွေ့ဖူးချင်လိုက်ရတာ
cuttiepinkgold on June 5, 2009 at 11:51 am said:
သြော် မတွေ့ဖူးကြဘူး ဆိုတော့လေ… ဟွန်း ဟွန်း